Tafika Malagasy: mahafantatra ny fahavalony ve?
2009-07-08 @ 23:01 in Ankapobeny
Mihetsiketsika mafy ny mpitandro ny filaminana malagasy amin'ny ankapobeny amin'ny fanenjehana ny "mpampihorohoro", ary mikofoka mafy miaraka amin'izany ny Kolonely Ravalomanana Richard amin'ny famoaham-baovao avy amin'ny zandarimariam-pirenena. Malaza manerana ny gazety malagasy indray ny alarobia 8 jolay 2009 fa "nandefa vola 25 000€ na Ar675 000 000" hoe ny mpikambana (iray?) avy amin'ny GTT Paris hanamboarana baomba vita tanana eto Madagasikara". Miha-henjana izany raharaha izany, hoy aho anankampo. Dia aleo mampitandrina ny mpiray tanindrazana any ampielezana mandefa vola ho an'ny Malagasy eto an-toerana mba atsahatra aloha ny fanampiana fandrao lazain-dry zalahy fa volan'ny fampihorohoroana ihany koa izany... izay vao vita hatreo koa ny amin'nyWestern Union sy ny Moneygram fa tsy maintsy ho tratran'ny fanadihadiana isan'andro ry zareo ao izany fa mety ho volan'ny mpampihorohoro malagasy avokoa ireny. Fantatra ihany anefa ny firenena iavian'ny mpampihorohoro malaza manerantany nefa tian'ny mpanongampanjakana fatratra ho namana.
Miomana fatratra amin'ny mety iavian'ny mpanani-bohitra ihany koa ny tafikamalagasy amin'izao fotoana izao. Mampahatsiahy indray ny fiainan'ny miaramila nandritra ny repoblika faharoa miomana fatratra amin'ny mety ho fanafihan'ny Afrikana Tatsimo tamin'izany fotoana izany. Miverina indray io tranga io amin'izao fotoana izao, fa raha Fotsy mpanavakava-bolo-koditra no mpitondra io firenena io tamin'ny repoblika faharoa dia Mainty tompontany kosa no mitondra azy amin'izao fotoana izao. Mbola Afrika Atsimo ihany manko no firenena lehibe toy ny hazondamosin'ny SADC ahiana hananika an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Variana amin'ny mpanani-bohitra mety ho avy anefa ny tafika malagasy ka tsy mahita ny mpanani-bohitra efa mamaka ao anatiny amin'izao fotoana izao.
Sary iray nanintona ny masoko tao amin'ny gazety l'hebdo de Madagascar tamin'ny 26 jona 2009 mitondra ny laharana 228, takelaka fanampiny pejy fahadimy, ireo sari-miaramila ao amin'ny efitra iray lehibe ao amin'ny Capsat Soanierana. Nanisa ireo miaramila teo anoloan'ny solosaina maromaro (mampahatsiahy ny 24 hour-n'i Jack Bauer) aho. Raha 16 mirahalahy no hitako dia mivandravandra fa raha vitsy indrindra dia 5 amin'ireo dia vazaha fotsy avokoa. Ny roa amin'ireo ihanykoa mbola ahiako ihany koa saingy tsy hita tsara moa ka ny vitsy indrindra ihany no lazaiko. Mazava loatra fa mpanofana ao amin'ny Capsat ireo miaramila hita miharihary fa vazaha ireo, ary ny fantatra fa manana fifandraisana ara-tafika akaiky amintsika aloha dia ny Frantsay ihany. Mazava loatra fa tsy misy miafina amin'ny tafika frantsay ny resaka rehetra momba ny tafika malagasy. indraindray aho te-hino ihany fa efa hatramin'ny niatombohan'ny fitondran-dRavalomanana no novolavolain'ireto mpampiofana Frantsay ireto ny sain'ny miaramila malagasy ka nahavitany nanongana ny filoha faratampon'ny foloalindahy. Tsotra ny nanaovany azy : Tsy tokony eo ambany fitantanana sivily izany ny miaramila.
Nambara ombieny ombieny ho fahadisoan-dRavalomanana Marc ny nametrahana ny minisiteran'ny fiarovam-pirenena ho eo ambany fiadidiana vehivavy (sivily?) ka hoe nahatezitra ny tafika amin'ny ankapobeny. Nolazaina ihany koa fa tsy mahalala ny fomban'ny raharahan'ny tafika ny filoha Ravalomanana (sivily) ka mampietry ny voninahitry ny miaramila. Izany no antony iray nananganana ny Komity Miaramila misahana ny Fiarovam-pirenena, izay araka ny fahalalako, tsy mandray baiko na avy amin'iza na avy amin'iza, fa manana ny fanapahan-kevitra farany manoloana izay mety ho fanafihan'ny vahiny. Tsy mahagaga amin'izao fotoana izao raha aderadera amin'ny haino aman-jery fa manao sarin'ady hiatrehana ny mpanani-bohitra ny manamboninahitra ambony ao amin'ity komity ity, ary mafana fo amin'izany ny ao amin'ny zandarimaria FIGN izay toby voalohany ihany koa nikomy tao amin'ny zandarimaria manokana. Ilay resaka fametrahana baomba iniana ankalazaina ihany koa etsy andanin'izany, amiko, dia fanairana ny tafika hiomana amin'ny ady, izany hoe efa ampidirina tsikelikely amin'ny lojikan'ny ady ny miaramila sy ny zandary amin'izao fotoana izao. Toy ny tongotra mby an-dakana aza io, tsy miverin-dalana intsony, ka ahiako fa rehefa tsy ho avy ny mpanani-bohitra noeritreretina dia hitodika hamely (efa namely eo amin'ny sehatry ny fitsarana) mivantana ireo mpitolona ho amin'ny ara-dalàna efa heveriny ao an-tsainy ho fahavalony ihany koa.
Fa toa, na iniana adinoina anefa ny "fahavalo" efa mamaka ao anaty izay hoe efa eto an-tanindrazana amin'izao fotoana izao, dia ireo namolavola tsikelikely ny sain'ireto miaramila ireto ary nahapetraka tsara fa namana sy mpiara-miasa mahafa-po ny tafika frantsay fa tsy tonga velively hanani-bohitra. Namana satria nanome voromby sy angidimby ho an'ny tafika malagasy ka, angaha tsy hitanao ireny nandritra ny matso tamin'ny 26 jona 2009 ireny? Fa iniana ampanginina ho'aho ny resaka sisintany izay ifanolanan'i Madagasikara sy Lafrantsa hatramin'ny ela. Misy nosy vitsivitsy takian'ny malagasy amin'ny frantsay haverina amin'ny tanindrazantsika dia ry Juan de Nova sy ry Europa izany. Tsy mihaino ny Frantsay fa hametraka fitrandrahana solika an-dranomasina amin'ny fari-dranomasiny (manodidina an'i Juan de Nova) ary efa manitsaka ny fari-dranomasin'ny Malagasy madio mangarangarana mihitsy aza... nefa tsy misy fifanarahana. Fa moa ve tsy hiaro ny sisintanin'i Madagasikara no antom-pisian'ny tafika? Koa nahoana no minia mikimpy amin'ity raharaha iray ity? Hangalatra ny solik'i Madagasikara anie izany i Frantsa e!
Izao manko no manana tombontsoa betsaka indrindra ny miaramila ka tsy fantany akory na hamaivaniny ny lanja ara-toe-karena ny zava-mitranga any amin'ny fari-dranomasintsika. Saingy ny iavian'ny ady rehetra anie rehefa tena dinihina tena mifototra amin'ny toe-karena fa fomba itantanana azy fotsiny ny politika. Efa nahazo fanampiana tamin'ny tafika frantsay ny tafika malagasy ka inona moa no antony iadiana, hoy angamba ny fanontaniana, fa manahy aho hoe matoa tsy mihetsi-bolomaso amin'izany ny Komitin'ny Miaramila dia sao sanatria sanatria miray tsikombakomba? aza misy anie izany! Na ataoko hoe tsy mila hevitra avy amina sivily aza ny tafika dia nilaza ny hevitro ihany aho. Izaho Soldat auxiliaire de 2eme classe nandritra ny fanompoam-pirenena ivelan'ny tafika kosa ve no hibaiko manamboninahitra ambony?
jentilisa, 9 jolay 2009 amin'ny 01:02 maraina.